संसद भवनभित्रै मन्त्रीले 'स्तनपान' गराएपछि हंगामा - Himalayan Kangaroo
संसद भवनभित्रै मन्त्रीले ‘स्तनपान’ गराएपछि हंगामा
Posted by Himalayan Kangaroo | १७ श्रावण २०७३, सोमबार ०४:१५ |
एजेन्सी । झट्ट यो तस्वीर हेर्दा भाइरल हुनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न । किनभने एउटी आमाले आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराइरहेको तस्वीर हो,जुन स्वभाविक प्रक्रिया हो ।
तर यो फोटो विश्वव्यापी रुपमा भाइरल बनेको छ भने आमाको साहसको सर्वत्र चर्चा भैरहेको छ । यी सुन्दर आमा सामान्य व्यक्ति होइनन् ।
उनी ब्राजिलकी मन्त्री हुन् । उनको नाम म्यानुएला दा भिल्ला हो । राष्ट्रिय सभाको सदस्य समेत रहेकी यी मन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल र वहस चलिरहेकै बेला आफ्ना सानो नानीलाई स्तनपान गराइरहेको तस्वीर हो यो ।
विशेष गरेर आधुनिक जीवनशैली जीउने आमाहरु स्तनपान गराउँदा आफ्नो शरीर विग्रने मनोचिन्ताबाट ग्रसित छन् । त्यसैले उनीहरु सकभर आफ्नो बच्चाहरुलाई स्तनपान गराउँन चाहन्नन् । यस्तै कामकाजी महिलाहरुले भने चाहना हुँदा हुँदै पनि आफ्नो बच्चाहरुलाई स्तनपान गराउँन पाउँदैनन् ।
त्यसो त स्तनपान गर्न पाउँनु हरेक बच्चाको जन्मसिद्ध अधिकार हो भने स्तनपान गराउँन पाउँनु मातृत्वको अनुपम अवसर हो । यी दुवै कुराहरुलाई मुद्दाको रुपमा वहसमा ल्याउँन ब्राजिलियन यी आमाले गरेको साहस सह्रानीय मानिएको छ ।
बच्चालाई स्तनपान गराएर उनले आधुनिक महिलाहरुलाई स्तनपान गराउँदैमा सुन्दरता विग्रिदैन भन्ने सन्देश दिन सफल भएकी छिन् भने कामकाजी आमाहरुले पनि दिनमा कम्तीमा एकपटक ड्युटीकै दौरानमा पनि स्तनपान गराउँन पाउँनुपर्छ भन्ने अर्को मातृअधिकारबारे वहस छेडिदिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
किनभने सन् २०११ मा यूनिसेफले निकालेको प्रतिवेदनमा विश्वमा १३ करोड ६७ लाख बच्चा जन्मेकोमा ३२.६ प्रतिशतले मात्र पहिलो ६ महिनामा सुरक्षीत र आवश्यकमात्रामा स्तनपान गर्न पाएका थिए ।
यसैबीच विश्व स्तनपान सप्ताह आजदेखि मनाइँदैछ । हरेक आमालाई आफ्ना शिशुलाई नियमित रुपमा ६ महिनासम्म स्तनपान गराउन प्रेरित गर्दै एक हप्तासम्म स्तनपान सप्ताह मनाउन लागिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सेभ द चिल्ड्रेनको आयोजनामा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेका छन् । यस वर्षको स्तनपान दिवसको नारा ‘स्तनपान जीवनको एक अपरिहार्य लक्ष्य’ तय गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र यूनिसेफको संयुक्त पहलमा सन् १९९५ देखि स्तनपान सप्ताह मनाउन थालिएको हो । नियमित स्तनपानले बच्चाको मात्र नभएर आमाको पनि स्वास्थ्य राम्रो हुने गर्दछ ।
बच्चालाई सुरक्षित तरिकाले स्तनपान गराउन जनचेतना मूलक कार्यक्रम सहित विश्वभर स्तनपान सप्ताह मनाउने गरिन्छ ।
Previousनेवार समुदायले आज गठेमंगल पर्व मनाउँदै,किन मनाइन्छ यो पर्व ?
Nextजापानले फलायो आँखा पीरो नहुने प्याज,यस्ता छन् विशेषताहरु
परीक्षा दिएका सबै विद्यार्थी उत्तिर्ण
१३ असार २०७२, आईतवार ०१:४३
महिला र पुरुषमा को बढी सुत्छन् ?
२८ बैशाख २०७३, मंगलवार ०३:०४
मनाईयो राष्ट्रिय टोपी दिवस (फोटो फिचर)
१६ पुष २०७६, बुधबार ०५:५३
जहाँ शवलाई आगो सल्काई मलामी घर फर्कन्छन्
३ पुष २०७४, सोमबार ०२:३०